Brown Manazava ny Spider, Izay Tokony ho Fantatrao
Biby sy natiora Hala
Ny fahazarana sy ny toetoetran'i Brown Spider
Ny lolo matevina, Loxosceles reclusa , dia manana laza ratsy sy malaza tsy manam-petra. Manerana ny Etazonia dia matahotra ny mitefoka ity arina ity ny olona, ​​mino fa mpanafika mahery vaika izy ary azo antoka fa niteraka ratra narevaka. Ny fikarohana momba ireo sombin-tsakafo mavo dia nanaporofo fa diso izany.
Ny singa malaza indrindra amin'ny zana-trondro matevina dia ny marika manondro ny tsapalothorax.
Ny tendan'ilay volombava mainty hoditra manondro ny kibony. Ankoatr'ity marika ity, ny mason-tsivana mavo dia singa menamena mangarahara, tsy misy loko, spots, na loko mifanohitra. Ny mari-pamantarana fivavahan'ny olona dia tsy toetra azo antoka. Ny fitarihana tanora Young L. dia mety tsy manana ny marika, ary ny karazana Loxosceles hafa koa dia mampiseho ny antsipirihany amin'ny antsipiriany.
Miaraka amin'ny karazana Loxosceles hafa dia misy mason-koditra mavo ny sombin-tsofina mavo, ary milahatra amin'ny paositry ny paositera telo. Io endri-javatra io dia mampiavaka ny spider Loxosceles amin'ny ankamaroan'ny hafa, izay matetika manana maso valo. Ny mason-tsivana mavo dia tsy misy tsiranoka matevina eo amin'ny vatany, fa rakotra volo tsara.
Ny fomba tokana hentitra ahafahana mamantatra ny zana-trondro mena, Loxosceles reclusa , dia ny mandinika ny génitalia. Miaraka amin'ny haben'ny vatana iray isaky ny antsasak'adiny, dia mitaky mikrôskôpôbôla lehibe izany. Tokony halefa any amin'ny mpitsidika any amin'ny faritra misy anao ianao mba hahafantarana ny manam-pahaizana manokana.
Ny zana-trondro dia mametraka fialana amin'ny alina, mamela ny fiarovana ny tranonkala hitady sakafo. Ny fikarohana ankehitriny dia maneho fa ny famerenana mavo dia voalohany indrindra ny mpangalatra, mikarakara bibikely maty. Hamono olona velona koa ny spider rehefa ilaina izany.
Mpiasa an-tsokosoko i Brown mandritra ny roa taona.
Ny vavy dia mametraka atody 50 atsy ho atsy, manangona azy ireo ao anaty sacs sable. Ny ankamaroan'ny famokarana atody dia miteraka eo anelanelan'ny Mey sy Jolay, ary ny vehivavy tokana dia afaka mametraka in-dimy isan-taona. Rehefa mitodika ny zana-tsipìkany, dia miara-mipetraka amin'ny reny ao amin'ny tranonkalany izy ireo mandrapahafatesany vitsivitsy. Ho an'ny taom-pivoriana voalohany, ny zana-tsavoka dia hihena fito heny alohan'ny hahatongavan'ny olon-dehibe.
Adaptations manokana sy fiarovana
Ny mason-tsivana mavokely mavo dia mampiasa jiro fohy mba hampidirana ny poizina cytotoxique ho lasa remby. Rehefa voakolokolo dia miondrika volom-borona mangotraka , ary io poizina io dia mety miteraka ratra nekotika amin'ny olona na biby izay nalaikitra.
Tsy ny fiarovan-tenan'ny mofomamy ihany no atao hoe venom. Raha toa ka manonona ny anarana, dia tena saro-kenatra ity spider ity ary mandany ny ora fohy mandritra ny hazavan'ny andro, amin'ny ankapobeny ao amin'ny tranonkala. Amin'ny fijanonana tsy mavitrika mandritra ny andro, dia mametra ny fisalasalany amin'ny mety ho tratrany ny fikojakoana mavo.
Mora kokoa ny trano fonenan'ny ala matevina. Ao an-tokantrano dia mahita toeram-ponenana ao anaty lakolosy, trano fitehirizam-bokatra, trano fitehirizam-bokatra, ary tranom-borona. Mandritra ny andro, dia mety hafenina ao anaty boaty misy bala, akanjo miloko, na kiraro aza. Any ivelan'ny trano, sombin-tsangam-bolo matevina hita eo ambanin'ny hazo fisaka, anaty kitapo hazo na hazo, na eo ambany vatolampy.
Ny sisin-tany niorenan'ny zana-trondro miorina dia voafetra ho an'ny fanjakana amerikana ao afovoany midwesty, atsimo mankany amin'ny Hoalan'i Meksika. Ny fifangaroan-javatra hafahafa sy mitoka-monina miaraka amina alaola matevina any amin'ireo faritra ivelan'ity faritra ity dia lazaina amin'ny varotra antserasera. Ny malaindaina mibontsina mavo dia mety mitady fialofana amin'ny boaty biriky, ary manamboatra ny lalana mankany amin'ny toerana tsy fantatra amin'ny entana amin'ny entana.
Notantarain'i Cellar Spiders
Nahoana no tsy mijanona ao amin'ny tranonkalany ireo jiolahy?
Tarantulas mangatsiaka mangina (ary ny zavatra hafa momba ny mpitaingin-tsoavaly)
5 Fanontaniana Manontany ny Tenanao Alohan'ny Hahazo Tarantola
Orb Weaver Spiders, fianakaviana Araneidae
Ahoana ny fikajiana ny sambotra?
Mpitsikilo, na Latrodectus
10 Zava-mahavariana mahavariana momba ny mainty hoditra
4 Soso-kevitra ho an'ny bibikely mahasoa ao amin'ny saha
Ny tantaran'ny thermometer
Ahoana ny fomba hiverenan'ny Grams amin'ny môlo
Ny fiakarana sy ny fahalavoan'ny Automat
Ny momba ny tanànan'i Sikh isan-taona any Sikh
Famaritana ny dikanteny sy ny fomba hanoratana ny iray araka ny tokony ho izy
Torolalana ho an'ny fahazavana eny amin'ny bisikiletanao - Ahoana no fijerena sy ho hita
Timor atsinanana (Timor-Leste) | Facts and History
Biogeographie: Famaritana karazana
Lisitry ny Boky an-tsoratra Danielle Steel
Lazao ny Alkanes voalohany voalohany
"Mianara an'i Gurbani Kirtan" avy amin'i Bhai Manmohan Singh: Review
Ny fomba hampianarana ny lasa tsotra
Pop Music and America, A 4th Of July Playlist
7 Ny sary sokitra lehibe: Avy amin'ny zava-misy momba ny zava-misy
Ny Imam 12: Mahdi sy Iran Ankehitriny
Famaritana ny Lalàna momba ny Lalàna ao amin'ny Theory
Diary an'ny zaza Wimpy, Boky iray
John Cena - Biography an'ny Superstar malaza WWE